Nin loo heysto “khiyaanadii ugu xumeyd” ee soo martay taariikhda cayaaraha adduunka - Bulsho News
Tiyaatarka Qaranka: Sida Soomaalida ay ugu naaloodeen masraxiyaddii ugu horeeyay...
Nin loo heysto “khiyaanadii ugu xumeyd” ee soo martay taariikhda cayaaraha adduunka
Xigashada Sawirka, EFE
Fernando Martín Vicente (midig) oo ku sugan ciyaaraha Sydney Paralympics isaga iyo Miguel Sagarra (bidix) waxaa wehliyo Madaxweynaha ciyaaraha olympic, Juan Antonio Samaranch
Qofka kaliya ee si sharci ah mas’uul uga ah kooxda kubbadda koleyga ee khiyaantay indhaha caalamka islamarkaasina ku guuleystay biladda dahabka ee ciyaaraha dadka naafada ee Paralympic -ga loo yaqaanno kuwaas oo ka qabsoomay magaalada Sydney sanadkii 2000, ayaa hadda beeniyay inuu wax ka ogaa qorshahaas.
Ninkan ayaa hadlay markii ugu horreysay tan iyo markii xukun lagu riday sanadkii 2013, wuxuuna sheegay in eedeymaha loo soo jeediyay ay ahaayeen “wax aan macquul ahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn”.
Dadka cayaaraha falanqeeya ayaa waxay arrintan ku tilmaameen khiyaanadii ugu darnayd ee soo martay taariikhda ciyaaraha. Kadib markii ay soo baxday in keliya ay laba ka mid ah koox idil oo ka kooban 12 ciyaartoy ay dhab ahaantii naafo ahaayeen.
Fadeexaddan ayaa horseedday in gebi ahaanba laga mamnuuco ciyaartooyda naafada Paralympics -ka sanadihii 2004 iyo 2008, taasoo burburisay shaqooyinkii kumannaan qof oo cayaaraha oo adduunka ah.
Ninkan ayay maxkamadda Spain ku heshay inuu “hindisay oo fuliyay” qorshihii lagu shaqaaleysiinayay dhalinyaro karti badan oo kubbadda koleyga ah oo aan naafo ahayn, Fernando Martín Vicente, oo markaasi ahaa madaxa ciyaaraha dadka naafada ah ee Spain
Markii uu aqbalay mas’uuliyadda khiyaanada waxaa lagu ganaaxay lacag dhan 5,400 euro (£ 4,600), waxaana sidoo kale laga tuuray dacwadaha 18 eedeysane oo kale, oo ay ku jiraan 10 -ka qof ee Paralympians -ka been abuurka ah.
Farxaan Hadaafow wuxuu ka qayb galayaa Paralympics-ka
Laakiin qoraalkiisii ugu horreeyay ee dadweynaha ee ku saabsan fadeexadda tan iyo dacwadaha maxkamadda ee 2013, Fernando Martín Vicente wuxuu BBC-da u qoray warqad ka kooban saddex bog oo uu ku beeninayo inuu wax lug ah ku lahaa.
Sidee loo sameeyay qorshahaas? Yaa dhiirri geliyay? Waa maxay dhakhaatiirta ama xirfadleyda naftooda u amaahiyey waxaas oo kale? Daacadnimo haddaan u hadlo,runtii ma aqaan, “ayuu yidhi
Waxaa uu sheegay in masuuliyadda uu isaga qaatay sababtuna ay tahay inuu ahaa maamulaha ciyaaraha dadka naafada ee Feddi, balse waxa uu intaasi ku daray in uu ka mid yahay aasaasayaasha cayaaraha dadka naafada dunida ee loo yaqaanno Paralympics-ka ka dib markii gabadhiisa laga helay curyaannimo maskaxeed oo aad u daran markay ahayd ilmo, saas awgeedna waxaa uu sheegay in eedeymaha isaga loo soo jeediyay ay yihiin “wax aan macquul ahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn”.
Waxaa la isku raacsanayahay in Fernando Martín Vicente, uu hormuud uu ahaa in la bilaabo ciyaaraha dadka naafada ee dunida markii ugu horreysayna waxaa lagu qabtay magaalada Atlanta sanadkii 1996-dii iyadoo markii xigtayna la qabtay sanadkii 2000.
Ramón Torres, oo ka mid ah labada ciyaartoy ee kooxda kubbadda koleyga oo runtii leh naafonimo maskaxeed, laakiin ay ahayd inuu dib u soo celiyo billaddiisii sida kuwa kale oo dhan.
Si kastaba ha ahaatee, Miguel Sagarra, oo ah xoghayaha guud ee Guddiga Paralympic -ga Spain oo horkacayay baaritaanka qishka lagu sameyay sannadkii 2000, ayaa ka biyo diiday isku daygii Fernando Martín Vicente ee ahaa inuu iska leexiyo eeddaha loo soo jeediyay.
“Suurtagal ma aha,” ayuu leeyahay. “Qof kasta oo yaqaan Fernando Martín wuxuu dhihi lahaa 100% waa wax aan macquul aheyn in ay dhici lahayd isaga oo aan ogeyn.”
Wuxuu intaas ku daray: “Eedeyntu waxay ahayd mid aad u culus. Xaakimku warbixintiisii ugu dambeysay wuxuu ku sheegay in wax walba lagu sameeyay amarrada iyo tilmaamaha Fernando Martín.”
He did something wrong – he should say, ‘I am sorry,’ and I would be very, very pleased
Captain of Spain’s Sydney 2000 Paralympic basketball team
Hase ahaatee, waxaa la dhihi karaa qofka sida tooska ah ugu dhacay fadeexadda qishka wuxuu ahaa kabtanka kooxda, Ramón Torres, oo ka mid ah labada ciyaartoy ee kooxda kubbadda koleyga oo runtii leh naafonimo maskaxeed, laakiin ay ahayd inuu dib u soo celiyo billaddiisii sida kuwa kale oo dhan. Waxa uu sheegay in uu walaac ka muujiyay shaqaalaha cusub ee kooxda waqtigaas laakiin loo sheegay in wax walba ay wanaagsan yihiin.
Fernando Martín wuxuu leeyahay hadda waxba kama ogayn arrintaas – ma sameyn karo arrintaas oo kale,” ayuu yiri Torres.
“Dabcan wax walba wuu ogaa, waxaan mooday inuu yahay nin ka weyn waxaas oo kale.
“Wax khalad ah ayuu sameeyay, waa inuu dhahaa, waan ka xumahay, aad iyo aad ayaan ugu farxi lahaa”.
Dan Pepper, oo ah soo saaraha taxanaha Fake Paralympians -ka, sidoo kalena waxaa uu xirfad uu leeyahay dabaasha ayaa sheegay fursaddiisii ugu fiicneyd ee billadda Paralympic -ka, sababtoo ah mamnuucidda cayaaraha 2004 iyo 2008, ayaa sheegay in diidmada Fernando Martín Vicente ay tahay “in dhibaato badan uu u geysanayo boogaha”.
“Waligiis kama uusan hadlin arrintan, haddana wuxuu la soo suuq tegayay isagoo sheeganaya inaysan ahayn wax isaga ku lug leh – waxay u muuqataa inay gebi ahaanba wanaagsan tahay in uu iska aamuso.”
British swimmer Dan Pepper investigates the biggest cheating scandal in Paralympic history
Peru’s Castillo swears in new prime minister in...
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda u dhaxeysa ururka...
Source: DA seeking to indict Robert Durst in...